Report: No permission to protest — ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်မပြု – Free Expression Myanmar
Mar 26, 2020 by Coordinator	in Publications ထုတ်ဝေစာများ
Click here to download No permission to protest ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်မပြု (7mb) >>
Ratify the ICCPR and the ICCPR’s Optional Protocol.
Amend the PAPP Law and Penal Code to bring them in line with international democratic standards (see below table for detailed recommendations).
Retract all local regulations banning protests and ensure that they are not reinstated.
Conductafull and consultative review of police laws to bring them into line with international democratic standards.
Amend the Myanmar National Human Rights Commission Law to bring it in line with the Paris Principles.[i]
Investigate and either discipline or prosecute police who have misused their authority against protesters.
To the Myanmar Police Force
Adopt clear, operationally-focused and accessible rules on the policing of protests, guided by the human rights principles of legality, necessity, proportionality, and non-discrimination. These should comply with the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials.
Train police on managing protests withaclear focus in all their planning, implementation, and evaluation upon facilitation of protests. Ideally, only trained police should manage protests.
Develop and implement clearer guidance for police on restricting protests, including use of force. This should clarify the circumstances in which restrictions can be imposed on protesters. It should also clarify the limits of police authority, explain crowd behaviours, and describe methods such as negotiation and mediation for de-escalating conflict.
Improve communications with the public, including by establishing clear lines of communication with protesters. Aim to reduce misunderstandings and promote dialog and negotiation.
Wear regular uniforms and display clear identification. Special clothing such as helmets and shields escalate tension and should only be used when necessary due toaclear risk of injury.
Only disperse protests where there is an imminent threat of violence and all attempts to de-escalate have been tried and failed. Dispersals should never be ordered due to any other reason.
To the judiciary and courts
Impress on judges, through internal guidelines and training, the importance of judicial independence, including the balanced treatment of expert testimony. Impress also the democratic standards relating to individual culpability.
Encourage and empower judges to apply the law according to democratic standards, in particular in protest-related cases by interpreting any law narrowly and in favour of the principle of liberty as demanded in the Constitution Article 6.
Train judges on international standards relating to the human rights to freedom of expression and freedom of assembly.
Conductareview of conviction rates and sentencing with the intention to develop internal guidelines on appropriate sentencing.
Invite independent human rights experts to the court to provide advice to the court, independent from either parties' legal teams.
Investigate and submit to Parliamentareview of freedom of expression in Myanmar, with recommendations for legal and practical reforms.
To civil society, media
Use the evidence in this report to push for full amendment of the PAPP Law and Penal Code.
Buildastronger support network for protesters who face criminal prosecution, including giving legal and financial support.
Support programmes advocating for full amendment of the PAPP Law and Penal Code.
ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်မပြု (7mb) >>
အရပ်ဘက်နှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်ရေးများဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (ICCPR) နှင့် ICCPR နောက်ဆက်တွဲ အခြေပြ စာချုပ်ကို အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးရန်
နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့်အညီ ပါဝင်နိုင်စေရန် ငြိမ်းစုစီဥပဒေနင့် ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်ရန် (အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော ဇယားပါ အသေးစိတ်အကြံပြုချက်များအတိုင်း)
ဆန္ဒပြမှုများကို တားဆီးပိတ်ပင်နေသော ဒေသအလိုက် စည်းမျဉ်းများအားလုံးကို ပယ်ဖျက်ပြီး၊ ယင်းတို့ပြန်လည်အသက်မဝင်လာစေရန် သေချာအောင် ပြုလုပ်ပါ။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပြီးပြည့်စုံပြီး အများပါဝင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသောပုံစံဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်ရွက်ရန်။
ပါရီဥပဒေသများနှင့်အညီ ဖြစ်စေရန် မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန်
အာဏာကိုအလွဲသုံးစားပြုလျက် ဆန္ဒပြသူများအပေါ် အာဏာအလွဲသုံးစားပြုသော ရဲနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ စည်းမျဉ်းများကန့်သတ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
လူ့အခွင့်အရေးစည်းမျဉ်းများတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော တရားဝင်ရှိခြင်း၊ လိုအပ်မှုရှိခြင်း၊အချိုးကျနသင့်လျော်ခြင်းနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု မရှိခြင်း မူအရ ရှင်းလင်းပြီး၊ အကောင်အထည်ဖော်မှုရေးရာကို အလေးပေးကာ လက်လှမ်းမီနိုင်သော စည်းကမ်းများကို ချမှတ်ရန်။ အဆိုပါစည်းကမ်းများသည် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဝန်ထမ်းများ/ ရဲဝန်ထမ်းများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ကျင့်ဝတ်နှင့်ကိုက်ညီရမည်။
ဆန္ဒပြပွဲများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် အစီအစဉ်ဆွဲခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျင့်သုံးကာ ဆန္ဒပြပွဲကို ပံ့ပိုး ကူညီသည့်အနေဖြင့် ကိုင်တွယ် စီမံနိုင်စေရန် ရဲများကို သင်ပေးရန်။ အကောင်းဆုံးအနေနှင့် သင်ကြား လေ့ကျင့်ပေးထားသော ရဲများနှင့်သာ ဆန္ဒပြပွဲများကို ကိုင်တွယ်ရန်။
ဆန္ဒပြပွဲများကို အင်အားသုံးဖြေရှင်းခြင်းအပါအဝင် ကန့်သတ်တားမြစ်ခြင်းလုပ်‌ဆောင်ရာတွင် ရဲများအတွက် ပိုမိုရှင်းလင်းသော လမ်းညွှန်ချက်များရေးဆွဲပြီး ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရမည်။ ယင်းတွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသူများကို တားမြစ်နိုင်သည့် အခြေအနေကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားရမည်။ ရဲများ၏ အာဏာအသုံးပြုမှု ကန့်သတ်ခြင်းများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြရန် ၊ လူအုပ်၏အပြုအမူများကို ရှင်းလင်းပြရန်နှင့် ပဋိပက္ခများကို လျော့ပါးစေရန် မည်သို့ညှိနှိုင်းရမည်၊ ကြားခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရမည်ကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြရမည်။
ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများကို ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင် ရှင်းလင်းသော ဆက်သွယ်မှု တည်ဆောက်ခြင်းအပါအဝင် လူထုနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရေးကို အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်။ နားလည်မှု လွဲမှားသည်များကို လျော့ချပြီး၊ အပြန်အလှန်စကားဖလှယ်ရေးနှင့် ညှိနှိုင်းစေ့စပ်ရေးကို အားပေးရန်။
ပုံမှန် ယူနီဖောင်းကို ဝတ်ဆင်ပြီး မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားရန်။ ဦးထုပ်နှင့် ဒိုင်းများသည် တင်းမာမှုကို အားပေးသောကြောင့် ဒဏ်ရာရနိုင်ချေများသည့်အချိန်၊ လိုအပ်သည့် အခါမှသာ သုံးသင့်သည်။
ဆန္ဒပြပွဲသည် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်လာတော့မည့်အသွင်ဖြစ်လာပြီး ဖြန်ဖျေမှုများကို ကြိုးစားသော်လည်း မအောင်မြင်သော အခြေအနေမှသာ ဆန္ဒပြမှုကို လူစုခွဲရမည်။ အခြားအကြောင်းအရာများကြောင့် လူစုခွဲခြင်းကို မည်သည့်အချိန်တွင်မျှ အမိန့်မပေးရပါ။
တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်နှင့် တရားရုံးသို့
ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ပြောကြားချက်၊ ဖော်ထုတ်တင်ပြချက်များမှ သင့်လျော်သော အချက်အလက်များအပါအဝင် တရားရေးမဏ္ဍိုင် လွတ်လပ်မှုရှိရန် အရေးကြီးပုံကို ဌာနတွင်း လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် သင်တန်းများပေးခြင်းဖြင့် တရားသူကြီးများအပေါ် အထင်ကြီး လေးစားမှု ရှိလာရန်။ တစ်ဦးချင်းစီ၏ ပြစ်ဒဏ်ထိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဒီမိုကရေစီ စံချိန်စံနှုန်းများကိုလည်း လေးစားရန်
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၆တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လွတ်လပ်ခြင်းမူကို ထောက်ရှုပြီးမည်သည့်ဥပဒေကိုမဆို အနည်းအကျဉ်း အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူ၍ အထူးသဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုနှင့် ဆိုင်သော အမှုကိစ္စများတွင် ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းများနှင့်အညီ အဆိုပါဥပဒေကို အသုံးချရန် တရားသူကြီးများကို အားပေးရမည်၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်လာစေရန် တိုက်တွန်းအားပေးရမည်။
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ရေးသားပြောဆိုခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာ စုဝေးခွင့်နှင့် ဆိုင်သည့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများကို တရားသူကြီးများအား အသိပညာပေးရန်
သင့်လျော်သော စီရင်ချက်ချမှုဆိုင်ရာ ဌာနတွင်း လမ်းညွှန်ချက်များ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ရည်ရွယ်ကာ ပြစ်ဒဏ်ကျခံရနှုန်းများနှင့် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ချက်အပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်မှု လုပ်ဆောင်ရန်
တရားရုံး၌ အကြံပေးနိုင်ရန် တရားရုံးသို့ လွတ်လပ်သော လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများကို ဖိတ်ကြားရန်၊ အဖွဲ့တစ်ခုခု၏ ဥပဒေဆိုင်ရာ အဖွဲ့မှ လွတ်လပ်သော ကျွမ်းကျင်သူကို ဖိတ်ရန်၊
ဥပဒေရေးရာနှင့် လက်တွေ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် အကြံပေးချက်များနှင့်တကွ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ရေးသားပြောဆိုပိုင်ခွင့်အပေါ် သုံးသပ်ချက်တစ်ခုကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းတင်ပြရန်
ငြိမ်းစုစီ ဥပ‌ဒေနှင့် ရာဇသတ်ကြီးတို့ကို အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးရန် ဤအစီရင်ခံစာပါ သက်သေအထောက်အထားကို အသုံးပြုရန်
ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တရားစွဲဆိုရင်ဆိုင်နေရသော ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများအတွက် ဥပဒေရေးရာနှင့် ငွေကြေး ဆိုင်ရာ အကူအညီပေးခြင်းအပါအဝင် ပိုမိုအားကောင်းသော ထောက်ပံ့ကူညီသည့် ကွန်ရက်အဖွဲ့တစ်ခုကို တည်ထောင်ရန်
ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေနှင့် ရာဇသတ်ကြီးတို့ကို အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြုပြင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးရန် ဤအစီရင်ခံစာပါ သက်သေအထောက်အထားကို အသုံးပြုရန်
ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေနှင့် ရာဇသတ်ကြီး တို့ကို အလုံးစုံ ပြင်ဆင် ပြုပြင်ရေးအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များကို အားပေးကူညီရန်
Tagged with: Conflict, Constitution, Human rights defenders, National security အမျိုးသားလုံခြုံရေး, Peaceful Assembly and Procession Procession Law, Penal code ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ, Police, Protection of journalists and human rights defenders, Public order, Right to assembly, Right to protest, Use of force